Faransiiska ayaa beeniyay inuu jebiyay cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Liibiya, kadib markii afar kamid ah gantaallada lidka taangiyada ee dalkaasi laga helay saldhig ay leeyihiin maleeshiyo daacad u ah Jeneraal Khaliifa Xaftar.
Wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa sheegay in gantaallada oo aan “la isticmaali” karin aan looga gol lahayn in la siiyo kooxaha Liibiya, isla markaana la rabay in la burburiyo.
Balse hubka ayaa laga helay saldhig ku yaal Koonfurta caasimadda Tripoli, oo ay adeegsadaan xooggag daacad u ah jeneraalka fallaagada ah ee doonaya inuu qabsado magaala madaxda dalka.
Duullaanka uu Jeneraal Xaftar ku qabsan rabo Tripoli ayaa bilowday bishii Abriil, waxaana tan iyo markaa ku dhintay boqolaal qof.
Afarta gantaal ayaa la helay bishii June, markaas oo ciidammada dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ay qabsadeen saldhigga, taasoo dhalisay in baaritaan ay samayso xukuumadda Washington.
Faransiiska ayaa qoraal uu soo saaray Arbacada maanta ah ku sheegay inuu leeyahay gantaallada oo loo adeegsado taangiyada iyo gawaarida kaleba.
“Hubkaasi waxaa lagu ilaalinayay xooggaga ku hawlan xog ururinta iyo ka hortagga argagixisada,” ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Faransiiska.
Waxa ay intaa ku dartay in gantaallada ay ahaayeen “kuwo hallaabay oo aan la adeegsan karin” isla markaana “si kumeelgaar aloo xareeyay ka hor inta aan la burburin”.
Faransiiska ayaa marar badan beenisay inuu hub siiyo xooggaga Jen. Xaftar, balse waxa uu u fidiyay taageero diblomaasi.
Muxuu salka ku hayaa dagaalka Liibiya?
Waddanka Liibiya tan iyo markii la riday nidaamkii Mucamar Qadaafi lana dilay 2011 waxaa hareeyay qalalaase iyo kala qaybsanaan.
Maamul si buuxdo gacanta ugu haya waddanka Liibiya ma uu jiro dalkuna ma degana, oo dagaal u dhaxeeya ururo siyaasadeed iyo kuwo milateri oo ay ugu muhiimsan yihiin dowladda ay Qaramada Midoobay baritaarto ee loo soo gaabiyo (GNA) ee uu hogaamiyo Ra’iisul wasaare Fayez Mustafa al-Sarraj, iyo Jenaraal Xaftar oo hogaamiya Xoogga Qaranka Liibiya ee loo soo gaabiyo (LNA).
Jaranaalka ayaa siyaasadda Liibiya waxa uu ku soo jiray muddo ka badan afartan sanadood waxa uuna mar ka mid ahaa xulafadii aadka ugu dhaweyd Qadaafi ilaa dabayaaqadii 80-tamaadkii ay arrin isku qabteen kaddibna lagu qasbay inuu dibadjoog ku noqdo Mareykanka.
Dowladda ay Qaramada Midoobay aqoonsan tahay iyo xooggaga LNA ayaa labaduba leh taageerayaal caalami ah.
Jen. Xaftar ayaa waxaa muddo dheer taageerayay Masar iyo Isutagga Imaaraadka Carabta, waxaana hadda taageeradaasi kusoo biiray Ruushka iyo Sacuudi Carabiya.
Mar uu ku dhawaa inuu qabsado caasimadda Tripoli, ayaa waxaa telefoonka kula hadlay oo u hambalyeeyay madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, balse xiriirkaasi ayaa u muuqda mid aan hadda xoog lahayn.
Dowladaha Reer Galbeedka ayaa dhammaantood taageersan dowladda midnimada qaran. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Tripoli, Qaramada Midoobay, Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa dhammaantood ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo xabbada oo wadahadal lagu dhameeyo arinta.
Faransiiska ayaa sheega inuu colaadda Liibiya ka qaatay dowr dhexdhexaadin ah. Haseyeeshee waxaa xira tuhun ah inuu taageero Jen. Xaftar.
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee Yurubiyaan ah Jeneraalka ku martiqaada wadahadallada nabada, waxaana diyaaradaha Faransiiska ay duqeeyeen xooggag Chad ka yimid oo dhabar jabin lahaa ciidamada LNA ee Khaliifa Xaftar.
Khubarada arimaha Liibiya ayaa sheegaya in taageerada Faransiiska ee Jen. Xaftar ay salka ku hayso khatar uga imanaysa maleeshiyaad khalkhal gelin kara ammaanka gobolka iyo weliba danaha shidaal ee dalkaasi uu leeyahay.